Uthando njengesifiso soSondo IsiSeko soMvuzo Uthando, u-Sex kunye ne-Intanethi
Ikhaya ubudlelwane Uthando njengesifiso soSondo
Umnqweno wesondo, ukuxhatshazwa ngokwesini, ukuxhatshazwa okanye ukuvakalelwa 'kwinqweno,' ngumvuzo wendalo, okanye isondlo, eqhutywa yi-neurochemical dopamine. Kule ngongoma i-dopamine ikhuthaza 'ukulindela' komvuzo, umnqweno nokufuna. Umsebenzi walo oyintloko kukuba sikhuthaze ukuba neentsana, nokuba ngaba sifuna ukuba nosana okanye cha, xa senza uthando.
Uhlobo lune-ajenda ecacileyo kwaye enamandla - ukufumana ezo zigulo kwisizukulwana esilandelayo. Iyanomdla kwimimandla yezofuzo. Isizathu salokhu kukuqinisa intlanzi ye-gene. Ukuxhamla kubangelwa ukungaziphathi kwemvelo kunye neengxaki zempilo. Le ngxaki kwiinkcubeko ezininzi apho ukutshata nabazala bomntwana kuqala. Ukuba neentlobo zofuzo zithetha ukuba ukuba kukho isifo sesifo okanye ezinye iinguqu ezinzulu kwiimeko zokuphila, kukho amathuba amaninzi ukuba abanye abantu baya kuba nexube leendiza eziya kubavumela ukuba basinde.
I-Orgasm, uvakalelo olunzulu lwolonwabo oluneenjongo zesenzo sesondo, lukhupha i-cascade ye-neurochemicals, i-opioids, esiyifumana ngayo. Ngelo xesha i-dopamine iyayeka ukuphambuka kwindlela yokuvuza. Naliphi na i-restto ibuyiswa kwakhona kwinkqubo ilungele ithuba elilandelayo ukusiqhubela phambili kwinjongo yokuphila, okwangoku iphunyeziwe.
Umnqweno wokuziva uvakalelo oluninzi lusishukumisela ukuba siphinde siphinde senze eso senzo. Kuzo zonke imivuzo yemvelo, i-orgasm yiyona inika enkulu ukukhululwa kwe-dopamine kunye nokuvakalelwa kwenkqubo yokuvuza yengqondo. Isicwangciso esinqununu kwisicwangciso sendalo ukuze sihlale sizalisa nokuvelisa iintsana ezininzi.
Kodwa kukho i-bug kwinkqubo, ngaphandle koko sonke siza kuthandana size siphile ngokuvuyisayo emva koko, kwaye izahluli zomtshato zazingenakuxakeka.
<< Izibini zeBonding Couples Iziphumo zeCoolidge >>